Saxiixayaasha Roadmapka iyo rabitaankooda sirgaxan! – Bashiir M. Xersi
Posted on 8 Aug 2012 19 Dec 2016 by Bashiir M. Xersi	Posted in Qoraallo
“Shacab walba madax u qalanta ayuu helaa!” Winston Charchill ayaa yiri, noolaa (30 Novembre 1874 – 24 January 1965). Philosopher Jean-Jacques Rousseau oo noolaa (28 June 1712 – 2 July 1778) wuxuu yiri: “Waxaan ogaaday in wax walba ku xiran yahay asal ahaan Siyaasadda, dhan koostoon u jeesannana waxaan ogaanaynaa in shacab walba aysan matali karin xukuumad aysan samayn!” murti Soomaaliyeed baa dhahaysa: “AJO GUUDKA SARE IYO GUNTA HOOSE WAA ISAGA MID”
Shariif Sakiin sidoo kale, waxaa xilka ka qaaday intii hore ugu dooratay xilkaa in ka badan, haddana laga fujin waayey, isagu garaadkiisa kuma tagin, garabna waa haystaa, waa “Gardarro garab og lagama guulaysto!” garabka wuxuu ka helayaa canaasir ka tirsan madaxda sare ee dawladda, oo iyagu raalli uga ah inuu sii hayo xilkaa iyo shisheeye uu waligiiba u ahaa kabaqaade, illeen hadduusan kalkaale u ahayn iyaba ma garab siiyeene.
Mudane Cabdiwali Gaas inuu xilka qabtay ka gadaal markii si qasab ah xilka looga qaaday mudane Formaajo ka sokow -igama ahan inaan taageero gaar ah u hayo Formaajo, oo waxaaba iiga filan beentuu dadka ku tiri: “DAN SOOMAALI AYAAN U TANAASULAY!” ee haddana Kampala isa sii taagay, waa meeshii xilka looga tiriyey, bal adigu meel lagugu ciilay ma u Cillaan saar doonan lahayd?- Aanse u soo laabto Gaase, ee waliba intaa ku ekaysane noqday Profka qabyaaladda, kuma sii ekayasane, dadkii Dastuurka mucaaraday ku tilmaamay dad aan wax garanayn! Mid ayaase hubaal ah inuusan garanayn waxa uu ku hadlayo!
Intaa iyo inta aanan xusin marka laga soo tago, waxay dadka ku madax xanuujiyeen khilaafkooda aan dhammaadka lahayn, ee aan lahayn hakad iyo joogsi maalin walbana taagan, sidii loo saxiixay qorshahan loogu yeero “Roadmap” waxaa dhawr kol la qabtay shirar ay isugu yimaadeen ka kala dhacay gudaha dalka iyo dibaddiisa, mid aan is marin waa iyo muran ka taagnayn ma jirin, hadba in koox shirka isaga baxdo yaa dhici jirtay, markay soo carara baaba’do ama laga caratiro ayeyna shirka dib ugu soo laaban jirtay.
Sida aan mudane Faroole loogu faragalin soo xulidda Odayada Bari ee ka qaybgala shirkan Muqdisho ka socda, miyuu garan waayey inuusan faraha la galin soo xulidda xunbo beel kale ku matali doona baarlamaanka, waxaa la yiri: “Nin waalan Tolkii baa u miyi rqabee!” qof ama cid mudane Faroole ceshata ma la waayey? Marka laga soo tago dhaleecaynta kaga iman karta odayaasha iyo siyaasiinta uu soo damcay inuu u qoondeeyo mudanayaasha ay baarlamaanka ka helayaan iyo inta maanka fayoobi hagayo! Saw ma ahan isku qaad boos aan u bannaanayn?!
Lixda Saxiixayaal waxaa ka mid ah, culumada Tusbaxlayda AHLUSUNNA, shirarakii hore u dhacay waxaa u meteli jiray C/qaadir Macallin Nuur, shirkan waxaa joogay mudane magaciisa lagu sheegay Sheekh Maxamed Maxamuud Yuusuf “Aw Libaax” waa markii ugu horraysay ee shirka Saxiixayaasha ka qaybgalo, haddaba, su’aasha yaa ah, xaggee ka soo galay shirka? Yuu ka sacday? Maya, aan saxee, yuu la socday, oo shirka keensaday? Mudanahan shirka lagu soo kordhiyey waxay muujinaysaa sida loo jabshay qorshaha Roadmapka, sida caadadu ahaydna wadaadada Camaamadaysan waxay ahaayeen goobjoog aan la garwaydiin!
Mudane Cabdiwali Gaas ilaa iminka wuxuu kala garan la’yahay danta beeli mudnaan siin karto iyo danta umadda Soomaaliyeed, waa maroo ma ahan markii ugu horraysay ee uu si dadban ama si toos ah u garabsiiyo mudane Faroole gaar ahaan mawqif la xiriira Maamulka Khaatumo State, waa marka labaade, wuxuu kala garan la’ yahay xilka inuusan u hayn Faroole, wakiil iyo ergana ka ahayn Maamulka Bari, ee uu xulka u hayo umadda Soomaaliyeed, bal sii goob qormadii ahayd: “Gardarrada Gaas oo laga wada gilgishay!”.
Aragtidu waa sidan: “Marka hore madaxweyna ha la doorto!” musharraxna waan ahay- sii baadi goob qormadii ahayd: “Anna Musharrax baan ahay!”- waana tartamayaa, haddaan ku guulaysto waan saan rabay, haddaan guuldarraysto haddana waxaan u tartamayaa guddoonka baarlamaanka.
Waxa waaye labada yaanan mid weynin, oo ka dhigan dhan walba aan ka miisto, haddaan kan waayo aan kan kale helo, si kale, waa “HAL DHAGAX LABA SHIMBIR KU DIL!” sidoo kale waxay la mid tahay: “LUDDA JECLI LAFTA JECLI!” aragtidan Shariif Sakiin haddii gabar Foodleey ah wax ka dheh la dhihi lahaa, tolow maxay ku jawaabi lahayd?!
Waxaa la yiri: “CAQLIGAAGOO BATA MACRIFADAADUU YAREEYAA!” malaha meesha CAQLIGA laga yiri, waxay ku habboonayd in DAMAC laga yiraa, illeen qof caqli lehi, marna kama dhalanayso in caqligiisu macrifadiisa yareeyee, inuu sii badayo ma ahane, haddii caqliguusu batana kumaba sii jirto.
Mudane caalin waxaa u dhammaaday xilkii uu ka hayey maamulka Galmudug State, sidii horeba uu uga dhaga adaygay codayntii baarlamaanka iyo go’aankii Maxkamadda sare, ayuu haddana mar kale ku gacan sayray labadaba, oo dhawaan baarlamaanka doortay Cabdi Xasan Cawaale “Qaybdiid” Maxkamadda sarana ansixixay.
Ugu dambayn, damaca beelaysan iyo sadbursiga qabyaaladaysan, hanqaltaagga aflabadi ah iyo rabitaannada sirgaxan, waxay muujinayaan sida ay fog tahay dawlad Soomaali yeelato, mid xunba ha ahaatee, maadaama la yiri: “DAWLAD XUMI DAWLAD BAY DHAANTAA!” oo xitaa mid xun aan la helayn, inta sidan loo dhaqmayo.
One thought on “Saxiixayaasha Roadmapka iyo rabitaankooda sirgaxan!”
Caamul Jamaaca: Shalay iyo Maanta
Dastuur duran iyo Dal dayacan!